Fampihetseham-batana 1: Mitsangana mahitsy tsara. Abontsina ny tratra. Mitazona baolina mafimafy iray amin'ny tanana roa ambonin' ny loha. Ampidinina mian-kavia ny tanana sady aforitra miakatra ny lohalika ka hatao mifanantona ny baolina sy ny lohalika. Izay fihetsika izay no averina in- 15 dia atao toy izany koa ny lafy ilany. Averina in- telo.
Fampihetseham-batana faharoa : Matory amin'ny kibo aloha dia akarina ny kibo ka mitehina amin'ny kiho sy ny lohan-tongotra. Aforitra ny lohalika havia hanakaiky ny kiho havia. Dia atao toy izany koa ny tongotra havanana. Izay fihetsika roa izay no averina in-20. Averina in- telo.
Fampihetseham-batana fahatelo : Mipetraka amin'ny tany sady mitazona baolina. Aforitra mifandimby ny lohalika ka hampandalovina ao ambanin'ny lohalika ny baolina. Atao in-15 isaky ny lafy.